XOG: Farmaajo iyo Kheyre oo dib kaga biiraya Shirka Dhuusamareeb | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Farmaajo iyo Kheyre oo dib kaga biiraya Shirka Dhuusamareeb
XOG: Farmaajo iyo Kheyre oo dib kaga biiraya Shirka Dhuusamareeb
Maalintii labaad Dhuusamareeb waxaa magaalada kasocda shirka wadatashiga Dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ,kaas oo ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada dalka.
Sida wararka aan ku heleyno, kulamadan ayaa waxaa banaanka ka jooga wariyaasha u tegay Dhuusamareeb iney soo tebiyaan warka shirka,maadama wejiga koowaad ee shirka shalay uu ahaa,kaas oo warbaahinta si toos ah u tebineysay.
Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada Galmudug, Jubaland, Koofur galbeed, Puntland iyo Hirshabeelle ayaa kulamo gaar gaar ah oo Albaabada u xiran yahay leh,kuwaas oo ay ku falanqeynayaan natiijada rasmiga ah iyo go’aanada laga filayo iney soo saaraan.
Warar aan helnay,balse xaqiiqdooda la hubin ayaa sheegaya in Madaxda Dowladda Federaalka sida madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal wasaare Kheyre ay dib kaga biirayaan shirka,maadama muhiim ay tahay in madaxda Qaranka ay cadeeyaan mowqifkooda doorashada xilli walaac badan uu jiro.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa isha ku heyso waxa ka soo bixi kara shirka magalaada Dhuusamaareeb oo labo ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada si weyn u diidan hanaanka shaqo ee Villa Soomaaliya.
Madaxda Qaranka ayaa si cad u sheegay ineysan damacsaneyn mudo kordhin oo doorashada waqtigeeda lagu qabanayo in kastoo mucaaradka aanay warkaas u cuntamin.